ReactOS, iyo Open Source vhezheni yeWindows | Kubva kuLinux
linuxero | | Kugoverwa
Kana uchitaura nezve inoshanda system Open Source, chinonyanya kuwanikwa ndechekuti Linux uve wekutanga kuuya mundangariro, zvisinei isu tinofanirwa kuziva kuti haisiriyo yega yemahara yekushandisa system iriko (asi ndiyo inozivikanwa kwazvo).
Nhasi tinokupa ReactOS, yakavhurika sosi inoshanda sisitimu iyo inopa kunze-kwe-kwe-bhokisi kuenderana neWindows zvinoshandiswa (uye madhiraivha), chaizvo shanduro Windows XP, Windows 7, Windows Server 2012.
Zvinoenderana nemisimboti yekugadzira dhizaini Windows NT, ReactOS haina kubva pa Linux uye haigovane chero chinhu neyakavakirwa UNIX.
Su tarisa uye unzwe ingango fanika neWindows 2000, nekusiyana kudiki pane yakakurumbira "Start" menyu. Tinogona kutaura kuti zvakafanana nekumhanyisa PC ine Windows 2000, asi yemahara uye yakavhurwa sosi. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti zvinonakidza kuti ivo vakwanisa kugadzira sisitimu yekushandisa ine hunhu uhwu, uye kunyangwe iyo inomhanya munzira yakatsiga uye ine hunyoro, kunyangwe iri muchikamu cheAlpha.
Kutanga skrini. ReactOS 0.4
Zvisinei, ReactOS Haisi nyore kutevedzera maWindows uye ivo vakaisa chimwe chezvinhu zvinodikanwa kwazvo muWindows izvo zvisati zvamboita muviri, Package Manager (Pasuru maneja) mune yakanakisa Linux maitiro. Kubva mairi tinogona kuisa akasiyana siyana emahara maficha senge Firefox, Libreoffice, Gimp, nezvimwe, mune Windows application fomati.
Kuyedza iyi sisitimu inoshanda, ini ndakaisa software yandinowanzo shandisa paLinux: Firefox, Chrome, VLC, Gimp, LAMP (mune ino WAMP), dzimwe nharaunda dzekuvandudza dzePython neJava, MySQL uye Postgres. Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti ini ndakakwanisa kushanda pasina matambudziko uye nenzira yakafanana nemabatirwo anoitwa muLinux. Chete yanga isiri Linux, asi Windows.
Kazhinji, ini handina kana chakaipa maonero nezve ReactOS. Yayo graphical interface haina kukwezva sezvazvino Linux desktops (Gnome 3 uye KDE, semuenzaniso), zvisinei chokwadi chekuti iri yemahara imwe nzira yeWindows inogona kuve inokwezva kune vazhinji vashandisi.
Ini pachangu, ini ndiri mumwe wevaya vangangoda kumhanyisa Windows zvishandiso vachishandisa WINENenzira iyoyo ndinogona kunakidzwa nezvakanaka zveLinux neWindows software (kunyangwe hazvo kwete ese maapplication anogona kuitiswa neWINE). ReactOS ingori Windows chaizvo, inogumira kana ichienzaniswa neLinux.
Shinga kuedza ReactOS uye goverana ruzivo rwako nesu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » ReactOS, iyo Open Source vhezheni yeWindows
Chaizvoizvo Reactos inoshandisa WINE mukati.
Kuve wakanyanya kujekesa, zvese WINE uye ReactOS vanogovana maraibhurari uye zvimwe zvidimbu zve software zvakafanana. Nharaunda mbiri idzi dzinoshanda pamwe chete uye zvese zvinobatsira kubva kune mumwe nemumwe.
WINE ndeye inoenderana dura yekumhanya windows-senge maficha pane UNIX-senge masystem uye ReactOS ndeye yese inoshanda sisitimu inoenderana neWindows NT kernel dhizaini
Ivo vanoti ReactOS yakavakwa zvichibva pane yakasvinwa Windows NT sosi kodhi, ichokwadi here?
Victor Rivarola akadaro
Kwete Miguel, hachisi chokwadi ...
Makore mashoma apfuura ... Vamwe vapambi vakasvika zvisiri pamutemo paWindows 2000 sosi kodhi paInternet ... Gare gare, runyerekupe rwakabuda. Saka vagadziri veReactOS vakambomira uye nekutsvanzvadzira nemaoko vakaongorora yavo yese sosi kuti vave nechokwadi chekuti iyo inogumbusa kodhi haina kuitika kana kubviswa. Izvi zvakavatora nguva yakareba, handirangariri kana mwedzi kana makore ... asi ivo vakazviita uye vakavhara miromo yeavo vese mune ramangwana vanogona kushandisa nharo.
Pindura kuna Victor Rivarola
Kunze kwekushamwaridzana kwazvo neiyo windows interface, mukana ndewekuti haina mavairasi!
Abel firvida akadaro
Kana iwe uine hutachiona zviripo paYouTube pane mienzaniso ye windows virus inomhanya muReactOS
Pindura kuna Abel Firvida
ReactOS ndiyo imwe nzira yakanaka kune yeMicrosoft monopoly yeramangwana, sezvo ichienderana nemabhanari eWindows Operating System.
Kubva munaJune pane tariro yakawanda yekuti chirongwa ichi chisarudzwe senge yechipiri inoshanda sisitimu muRussia. http://www.muylinux.com/2015/06/22/rusia-reactos-linux
Nehurombo, iyo inotsigirwa Hardware ishoma uye mashandiro ayo mune chaiwo michina zvinoenderana nekugadziriswa kwayo kwechiitiko chakanaka. https://www.reactos.org/wiki/Supported_Hardware
Ini ndinokurudzira kushandisa kwayo kwekuyedza uye chero mabuditsu ebhugi kana rutsigiro rwemunharaunda zvinogamuchirwa
Ichiri chakasvibira. Iyo ine dzimwe nyaya dzekugadzikana. Handina kuzviedza mumwedzi mishoma. Inokurumidza kwazvo. Izvo zvine kusapindirana neMicrosoft Office, ini ndinofunga zvakafanana neWine nekuti, sekuzvinzwisisa kwandinoita, vanogovana imwe kodhi. Ndakaedza kanoverengeka kuisa MS-Access uye handina kukwanisa. Zvinoitika kwandiri zvakafanana neWine.
Pakupedzisira Virtualbox ine Windows XP. Chinhu chakanakisa ndicho chinosimudza, unotora zvirongwa zve repo munguva pfupi.
ndine hurombo asi ndiani muhupenyu chaihwo anoshandisa MS Access ?? Tiri muna 2015 !!
Chii chakashata nekushandisa Access kana chero imwe dhatabhesi maneja?
Ndakaita kunyorera muAccess kwemakore, nekuti ini handina zano rakawanda rehurongwa, zvinondigonera, zvinondichengetera basa rakawanda uye ndinogona kuchengeta diki accounting. Chimwe chigadziko chandaive nacho, kubata chete maakaundi ebhengi, ndakapfuura kuLibreOffice, asi imwe yacho isati. Ndine ma module maviri akagadzirira, asi ini ndiri kushayikwa chetatu.
Dambudziko imishumo iri muLibreOffice, ivo havatenderi subreports uye kuita mushumo zvakati omei zvinosemesa, nemibvunzo yedata yakadzvanywa, iyo yandisingade.
Ndiri kuyedza kugadzira mafomu, ine mafomu emishumo, kunyangwe kana akareba zvishoma haakwani pane peji rimwe, uye tafura yekudzivirira haigone kuiswa pamapeji akawanda.
Kushandisa Mariadb kana Mysqlo zvinoita kunge kwakanyanyisa pane zvandinofanira kubata.
Ndokusaka ndichiri kushandisa MS-Access, inova ndiyo chete yandisina kubudirira kutsiva.
Ndakaiyedza kanoverengeka mumamishini chaiwo uye yanga isina kugadzikana pakutendeuka kwekutanga, wakamboedza vhezheni ipi uye wakazviitei pairi?
Nekudaro, waini yanga ichindibatsira kwazvo kumhanyisa maapplication anongori eWinodws uye anoshanda chaizvo newaini senge, sqlyog, MLCad, amstrad cpc emulators, mimwe mitambo, nezvimwe ...
Nezve iyo package package, zvinofungidzirwa kuti muWindows 10 ivo vakawedzera imwe inonzi OneGet (Ini handizive kana vakazopedzisira vaiburitsa pamwe neyekupedzisira vhezheni yeWindows) uye zvisati zvaitika zvaitovepo Chokoreti uye iyo inoshanda chinangwa chimwe chete.
Pindura kuna Swicher
Ini ndinofunga izano rakanaka kwazvo iro richine nzira refu yekufamba. Zuva ravanoburitsa vhezheni 1.0 ndichafara kuzviedza.
Zvakanaka, ini handizive, kunyanya ini ndinofunga hazvishamise izvo zvisiri kudikanwa uye ndizvo chaizvo zvazviri. Reactos, kunyangwe iri budiriro yakanaka kune zvazvinoreva (zvine chekuita nerejinjiniya) inogona kupa zvakawanda nekuzvimiririra kubva pachikuva icho chiri kutsvaga. Ini handioni iyi sisitimu ichishanda sechinhu chakakomba chekushandisa mukati nepakati nepakati.
Mbudzi 1, 2015 5:10 PM
Vanoti iyo ReactOS yakavakwa zvichibva pane yakasvinwa Windows NT sosi kodhi,> ichokwadi here?
Handifunge kudaro. Kubva pane zvandiri kunzwisisa, rese basa rakavakirwa paWindows NT kernel dhizaini kuburikidza neReverse Injini uye yakaburitswa seyakavhurika kodhi.
Ini ndinorangarira iyo nguva iyo NT kodhi yakaburitswa uye vashandisi vazhinji vakafunga kuishandisa muReactOS kuti ikurumidze chirongwa, asi ivo vanogadzira vakaramba nekuti zvaive zvisiri pamutemo uye chimwe chigumbuso chaive chekuti anofungidzirwa kuti anovandudza aisanganisira zvisiri pamutemo kodhi (kuteedzera / kunama kubva windows ). Mheremhere yaive yakawanda zvekuti chirongwa chakamiswa zvachose kudzamara kuongororwa kwekodhi uye zviwanikwa zvisiri pamutemo zvikaonekwa.
Saka chirongwa chakadzikiswa zvakanyanya neiyo Microsoft cheki?
Yakanga isiri Microsoft yakazviongorora. Kuongorora kwekunze kwakaitwa (zvinoita sekubhadharwa nenharaunda kana chimwe chinhu) sevagadziri veReactOS vaisada kushandisa kodhi isiri pamutemo uye vaisada kuti mukurumbira wavo udzike nekuda kwechiitiko ichocho.
Sezvandakareva mune imwe mhinduro, ikozvino zvave yechipiri yeRussia OS, zvinobatsira chirongwa ichi kuenda kumberi.
Ini ndinokoka avo vanofarira kuti vaedze uye vataure mabugs. Izvo zvinobatsira iyo ReactOS uye Waini nharaunda.
Kana iwe uchida kudzidza zvakawanda, tarisa iyo ReactOS peji (www.reactos.org) kana maforamu enharaunda.
Mubvunzo wemamirioni emadhora, ino sisitimu chero kushandiswa? Pamusoro pechinyakare kuda kuziva kwekombuta, ndinoreva, kuti ndinowana kuzviedza munguva yakapfuura uye nokutendeseka kunyange waini inoshanda zvirinani kumhanyisa windows zvirongwa. Uye handisi kuti waini inoshanda chaizvo.
Yakagadziriswa pane chero chinhu?
Mubvunzo wemamirioni emadhora, ino sisitimu here yekushandisa?
Hongu uye kwete. Iyo software mune alpha mamiriro uye iyo inotaura zvakawanda nezve yayo mamiriro ekusimudzira uye kugadzikana. Iyo inoshandiswa kufamba uye kuita mamwe mabasa ekutanga ayo chero mamwe maOS anopa (ini ndaigona kutotarisa mafirimu pakati pezvimwe zvinhu).
Asi kuona kupfuura kugutsa kuda kuziva kwemusayendisiti wemakomputa, ndiko kuyedza ReactOS uye kuita mabasa ezuva nezuva nekunyora zvikanganiso zvinouya, kuti avo vanokwanisa vagadzirise chidimbu chakakosha che software.
Zvakawanda kubva pane zvakaitika kwandiri. Yakavandudza mukugadzikana uye kutsigirwa kwehardware.
Zvakanaka, uchifunga nezvekuti zvese zvinoshandiswa nevashandisi parizvino pamakomputa avo kuve husimbe paFacebook neTwitter, zvinoita zvese zvaunoda…!
Alex Gonzalez akadaro
Izvo zvinofanirwa kucherechedzwa kuti yakavakirwa nereverse engineering, iyo inowedzera iyo yekuwedzera mukukodzera.
Pindura kuna Alex Gonzalez
Zvakanaka kuti mumwe munhu arikushanda neizvi, ndanga ndichiita bvunzo munguva pfupi yapfuura neReactOS, pasina Internet, saka handina kukwanisa kuisa chero chinhu nemaneja wepakeji uye ndosaka ndine mimwe mibvunzo yekukubvunza iwe.
- WAMP yakashanda zvakanaka kwauri, wakakwanisa kuitisa kunyorera nekuishandisa?
- Wakaedza socket mashandiro kana imwe module senge SimpleHTTPServer mu python, yakushandira iwe here?
Reactos = waini - gnu / linux